Bash: Otu esi eme edemede edemede | Site na Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | GNU / Linux, Mmemme, Na-atụ aro, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Achọrọ m nke nta nke nta itinye isiokwu kụọEnwere m ọtụtụ ihe iji kụziere gị obere obere ndụmọdụ, mee edemede, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, nke mere na ọrụ anyị na-arụ kwa ụbọchị bụ akpaka, yabụ o doro anya na ọ ga-azọpụta anyị ọtụtụ oge 😀
Ugbu a, m ga-egosi gị ihe ndị bụ isi, ihe ị ga-achọ ịma mgbe niile, nke ahụ ga-enyere m aka maka nkuzi ndị ọzọ 😉
1 Otu esi eme edemede .sh
2 Kedu otu esi agba ma ọ bụ nwalee edemede .sh?
Otu esi eme edemede .sh
Mfe ... dị mfe 😀
Nke a ga-ezu iji mepụta faịlụ maka ha ederede.sh na ya onwe nchekwa.
2. Na ọnụ tinye ihe ndị a:
3. Njikere, ị nwere akwukwọ edemede gị 😀
Ọ bụrụ na anyị mepee ya, anyị ga-enwe ihe dịka nke a:
Mgbe usoro nke abụọ ahụ gasịrị, a na-ede ntụziaka ahụ site n'ebe ahụ.
Dịka ọmụmaatụ, anyị ga-agwa gị ka ị gosi anyị na njedebe «<° Linux kachasị mma»😀
Anyị ga-enwe edemede dị ka ndị a:
Kedu otu esi agba ma ọ bụ nwalee edemede .sh?
1. Anyị ga-aga na folda ebe edemede ahụ dị, na ihe atụ gara aga ọ ga-abụ folda nke aka anyị, yabụ anyị mepee ọnụ, n'ime ya anyị dere ihe ndị a ma pịa [Tinye]:
2. Ugbu a, anyị na-eme ya site n’itinye otu isi na ịsụcha azụ (soro), wee soro aha edemede ahụ, nke ahụ bụ:
Na bingo, anyị nwere ya 😀
Mee ya ma ị ga-ahụ ...
Ugbu a, otu ihe dị mkpa zuru ezu, na njedebe ha kwesịrị mgbe niile tinye «Ụzọ ọpụpụ«
Ma nke ọma ugbu a, ọ dịghị ihe ọzọ ị ga-agbakwunye, chere naanị maka nkuzi ga-eme n’ọdịnihu, ebe a ka ị ga-amụta bash HAHA.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Bash: Otu esi eme edemede edemede
Ekele dịrị enyi, achọpụtara m mgbe niile etu esi eme script.sh, ugbu a ọ bụ oge mmụta, a ga m eche nkuzi ndị ọzọ.
Nah, obi ụtọ hehe 😀
Gha ahu ... nke nta nke nta aga m etinye Bash tutorials, iji lee ma mmadu enwe obi uto, muta na anyi niile ka mma HAHA.
Ndewo, m ga-achọ enyemaka gị ma ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka na ụfọdụ edemede nke m jigidere na m kwesịrị ime maka isiokwu, m ga-enwe mmasị ịbịakwute m.
Ana m ekele gị nke ukwuu n'ọdịnihu
Ah mmadụ !! Akwa 😉
Cheta na mkpesa ma ọ bụ ntụnye ga-anabata nke ọma 😉
Enwere m mmasị na post, oge ọ bụla m chọrọ isi edemede m ga-amalite na ịgagharị naanị iji chọta ahịrị: "#! / Bin / bash" na nkụnye eji isi mee (ana m echefu echefu). Ugbu a na onyinye a enwere m ike ịkọwa ya naanị detuo na mado 😀
Cheta na ọ bụ / bash na / sh ... ọ bụ ihe dị iche iche, mgbe m nọrọ ụbọchị abụọ na-alụ ọgụ na edemede nke na-arụghị ọrụ m dịka o kwesịrị, ọ bụkwa n'ihi na m tinyere sh kama bash
Ajuju obula i gwa anyi.
Jajajajajaja na nke a bụ nke kachasị mfe, ị nwekwara ike mepee gedit ma ọ bụ editọ ọ bụla ma detuo:
Mgbe ahụ anyị na-enye ya ikike ikikere….
ezigbo data .. ekele m
hehe ee, nke a gaara eme dị ka nke a, mana amaghị m ... echere m na ọ ga-adị mfe ịme oyiri / mado nke ahịrị abụọ (nke nwere ike bụrụ otu) na ọ bụ ya, kwadebe edemede yana ikike ikikere na isi ya head
Ndị Bertholdous dijo
Kwesịrị ịchekwa mgbe niile dị ka faịlụ .sh?
Na windo ya yiri ga-abụ .bat faịlụ. Ma maka ederede ha, ha dị ntakịrị karịa.
Ezigbo mma che
Ana m echere ọkwa na-esote na oge ị na-ede ihe.
Aro ọ bụla, edemede ị chọrọ ka m mee ma ọ bụ ihe ọ bụla? 😀
Nke a ọ bụ onye na-amaghị ka esi eme mmemme? Ọ bụ ezie na ọ dị mfe, ọ bụ mmemme
HAHAHA bia ... ị na-enwe ọ excitedụ? ... mụta ntakịrị Bash, ị ga-ahụ etu o si dị ukwuu, ịkwesighi ịma etu esi eme mmemme, tere aka na ya 😀
Kedu ihe i kwuru?
Achọrọ m, taa, anaghị m maka nke ahụ
N'ezie, ọ bụrụ na a ga-ekepụta oge niile, ọrụ ahụ n'onwe ya nwekwara ike iji aka ya rụọ ọrụ na-akpaghị aka (ọ bụ naanị depụtaghachi ya na ụlọ $ / bin / ma nye ya ikike ikikere)
N'ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ edemede ọhụrụ enweghị oke, mepụta $ ụlọ / script.sh, ma ọ bụrụ na ọ na-agba ọsọ ọhụrụ edemede ọzọ edemede, na-emepụta Ederede
Ndewo enyi, m ga-achọ ịma otu m ga - esi mepụta autorun maka sdcard yana ekwentị m gụọ ya na android yana na mgbe emechara ya, m ga - ebido abd.exe gbakwunye iwu bugreport> bugreport.txt
Enweghị echiche ọ bụla enyi ... Enwetụbeghị m gam akporo.
Ekele, Achọrọ m ịchọta ebe a ga-esi kuziere m ụfọdụ ederede, echere m na na email a kpọtụrụ m gị, nke bụ n'ezie ihe m kwesịrị ịmụ. M gbasoro usoro ị zuru ezu na ihe niile zuru oke mana ọ naghị agba ọsọ, enwetara m nke a:
./script.sh: akara nke 5: EOF na-atụghị anya ya mgbe ị na-achọ nha `` ''
./script.sh: ahịrị 9: njehie arụ ọrụ: njedebe faịlụ ahụ adịghị atụ anya
Kọwanụ m ihe m bu nzuzu
Mmejọ m, WordPress gbanwere ụfọdụ nkọwa, lee anya na koodu ahụ na post ma tinye ya dị ka nke a na edemede gị.
Ihe na-eme bụ na:
Ọ bụghị otu ihe ahụ dị ka:
Aghọtaghị m, m ka na-ahụ ya otu. Ebee ka mgbanwe ahụ dị? Nwere ike ịkọwa m nke ọma. Ugbu a mgbe ị na-enye ya igbu, akara a na-apụta:
./script.sh: ahịrị 5: °: Faịlụ ma ọ bụ ndekọ adịghị
Nyefee m edemede ị na-agba, tinye koodu ebe a: http://paste.desdelinux.net
Lelee post ọzọ, ọ bụ na echefuru m pịa bọtịnụ Mmelite Update
Aga m agwa gị na m na-ele ederede conkyrc nke ị meere maka 2010 gị ma ọ bụrụ na, ọ bụ eziokwu, akara ngosi disk bụ nke a na-akpọ Poky mana ọ naghị abịa na ndabara na libreOffice na Ubuntu 12.04, ọ ga-adị mma, ma ọ bụrụ na ị nwere isi iyi a , gwa m ebe m nwere ike ibudata ya na (ihe siri ike, n'ezie), otu ihe m chọpụtara bụ na mgbe edere mkpụrụedemede akara ndị a na akara anaghị adị na sistemụ ahụ, ọ na-etinye akwụkwọ ozi ahụ, ọ bụghị akara, Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya, amatalarị m echiche otu ihe niile si arụ ọrụ, mana achọrọ m ka mmadụ kọwaara m ihe iji ghọta ya nke ọma, ihe niile m na-eme bụ site na mwepu na anaghị m enye mmemme ọ bụla, ọ bụghị sayensị kọmputa ihe m mụrụ Ọzọkwa, ọ bụ oge ọzọ, enwere m Mgbakọ dị ka ihe omume ntụrụndụ na ihe dị mma bụ na m na-arụ ọrụ n'otu n'ime alaka ya, ihe niile m mụtara bụ nkuzi onwe m, yabụ mmasi m nwere n'ebe onye, ​​ọbụlagodi nta, Duzie m. nke a bukwa edemede nke conky m ma akowa ihe m nwetaghi:
Lee anya, mgbe m na-anwa itinye HDD ọzọ ka m na-enweta otu ahụ n'ihi na ọ na-enye otu okpomọkụ ahụ. Enwetaghị m njirimara CPU na sistemụ, ọ na-apụta (NULL) n'atụghị egwu, mgbe m na-anwa itinye kalịnda ị tinyere na Conky na tanias na 2010 na-ahazi ma gbasaa ogwe osisi ahụ. Lee anya ịhụ mmezi niile ị nwere ike ime. Enwere m mmasị na ya na obosara m nwere yana kalenda gị dabara na obosara ahụ yana na ihe niile m gwara gị na anaghị egosi na-apụta, ebe ọ na-aga:
–Tinye koodu na mado anyị, yabụ ihe ndị a ekwesighi.
eziokwu bụ na onyinye gị na-akwa ụta
Ndewo, iji ihe edemede a mee ka ndụ m dị mfe. I meela nke ukwuu n'ihi na m ga-achọ ịma ma ị ga - ezitere m email ebe ị kọwara ya ebe m bụ nevo na mmemme.
Mma na enweghị m ike ịkọwa / kọwaa usoro koodu ndị a, gịnị ka ị ghọtaghị ịkọwa n'ụzọ ọzọ?
N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ, ị nwere ike ịjụ mgbe niile na nnọkọ anyị: forum.desdelinux.net
Ezi onyinye ma ị nwere ike ị mechie ya ... Achọrọ m edemede maka ụgbọ mmiri. Nke ahụ bụ, mgbe Sai ghọtara na ọ dị na batrị ma nwee nkeji 20 iji gbanyụọ ya, ọ na-eziga mgbaama na ngwaọrụ yana nke ahụ ga-eme edemede ahụ iji gbanyụọ ụfọdụ sava. Amaghị m ma m kọwaara onwe m nke ọma ... Valdria na-etinye na edemede gị «shutdown -h» ??
Jizọs bụ Israel perales martinez dijo
Ihe ọzọ ịgbakwunye na m template nchekwa: B
Onye nwere ike inyere m aka, achọrọ m edemede maka ubuntu na ọ bụrụ na anyị mechie ihe nchọgharị chrome, mepee ya ọzọ
Achọrọ m edemede na naanị site na ịme ya ga-edegharị ozi nke faịlụ na ederede ọzọ, onye ọ bụla maara otú ọ dị?
Ahụrụ m na n'elu ha na-ekwu otu esi eme ya
Ezigbo mma, magburu onwe ya maka ụmụ ụmụ m.
Otu puku ekele. »Ka ị nwere ọtụtụ ndị na-eto eto, ị na-eme dị ka ndị nkuzi ... ọ ga-abụ ihe ịtụnanya.
Ndị Rom PC dijo
Dị mfe ma rụọ ọrụ, dịka o kwesịrị ịdị.
Zaghachi na Román PC
Daalụ maka enyemaka gị. Ọ bara uru, ezigbo nkọwa.
Zaghachi Hernán Jaramillo
Daalụ maka ozi m. Cheers
Dị mfe ma dị irè. Ezigbo nkuzi maka ndị ọhụrụ 🙂
Ndewo, amatacha m ihe banyere edemede mana amaghị m ma m bụ echiche mgbagwoju anya mana ihe m na-achọ ime bụ na ibe weebụ a:
Ihe kpatara ya bụ na aghọtaghị m otu esi amalite koodu a ma ọ bụ ọ bụrụ na nke a dochie IPTABLES. Ma ọ bụrụ na ọ na-anọchi ya dị ka ọ ga-abụ nke mere na ọ na-amalite na-akpaghị aka na OS.
Zaghachi Luis Carlos
Ezigbo Gaara !!!
Amalitere m ime ihe omume ụlọ akwụkwọ dịka ị kọwara na ọ rụ ọrụ !! Daalụ maka iwepụta oge na ịkekọrịta ihe ọmụma gị si n'ọchịchịrị pụta na ndị amaghị.
Ndewo, enwere m ajụjụ ọ bụla iji mee edemede nke onye ọrụ na-emepụta, ị nwere ike inyere m aka?
ndewo Enwere m ajụjụ na faịlụ .sh
ị nwere ụzọ ọ bụla na
Akpọtụrụ m gị iji hụ ma m na-eme ya ọfụma?
#! / usoro / bin / sh
ugwu -o remount, rw /
ugwu -o remount, ro /
, M na-eji aka ya na-agba ya na njedebe ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ, mana mgbe m chọrọ ka faịlụ ahụ gbaa ọsọ ọ chọghị.
Achọtara m nke a na vivaolinux.com.br, ọ mara mma
Dabere na Gera.sh - Gera cabeçalho maka edemede
Onye dere ya: Sandro Marcell P. Barbosa (Boa Vista - Roraima)
Ojiji ojiji: script_name my_script
I nwekwara ike dee ndọtị, kwekọrọ ma ọ bụ onye ntụgharị okwu.
Ex: nome_script backup.sh maka onye ntụgharị okwu 'sh'
ma ọ bụ nome_script backup.tcl maka onye ntụgharị okwu 'tcl' ma maka ụbọchị ahụ!
Kọwapụta onye ntụgharị okwu ị nwere ike (dochie onye ọzọ!):
Nkọwa = »#! / Bin / sh»
Isi ọdịnaya (gbanwee dị ka ịchọrọ!):
Onye Okike = »## Onye dere ya:»
EMAIL = »## E-mail: Nwunye@correo.com»
Na-enyocha ma ọ bụrụ na onye ọrụ akọwapụtara aha edemede:
ọ bụrụ na [$ # -eq 0]; mgbe ahụ
ikwughachi ">>> Ojiji: $ (basename $ 0)"
ọ bụrụ na [$ # -ge 2]; mgbe ahụ
ikwughachi "Aha na oghere anaghị adabara!"
Nwere ike onye ọrụ dee na nke ugbu a ndekọ?
ọ bụrụ na [! -w $ PWD]; mgbe ahụ
ikwughachi "Onweghi ikike ide ihe ndekọ ugbu a!"
Ọ bụrụ na e nwere ederede ọzọ nwere otu aha na ndekọ aha ugbu a?
ọ bụrụ na--f $ 1]; mgbe ahụ
ikwughachi "Ederede nwere otu aha ahụ adịla na ndekọ ndekọ a!"
pusi << Ọgwụgwụ
Ugbu a tinye iwu na usoro ndị sochirinụ =)
Bọchị okike nke edemede a: $ (ụbọchị «+% a% d /% m /% Y») na $ (ụbọchị «+% T»)
Isetịpụ igbu ikike:
ikwughachi "Edemede $ 1 kere ma kwe ka o kpue!"
Bọchị okike nke edemede a: 29/01/2013 19:45:00
Akwa, ọ na-arụ ọrụ zuru oke !!!
Ezigbo nkuzi, dị mfe ma ọ nyerela m aka nke ukwuu, daalụ
Ezigbo KZKG abụrụ m onye ọhụụ, mana enwere m mmasị n'ịmụta.
Have nwere ederede ọzọ. Ma obu na mberede ebe m na aru oru m choro imepe nke a chikotara ma enweghi m ike ihu ya.
Echiche ọ bụla.
Achọrọ m enyemaka na edemede. A chịkọtara ya.
Oma 9 dijo
Aghọtara m banyere bash, mana ọ bụrụ na m chọrọ ịme akpaaka akpaghị aka ọ naghị apụta
Zaghachi ka ọ dị jụụ9
Ana m ekele gị nke ukwuu maka enyemaka enyi gị.
Ọ ga-amasị m ịmara ma ị nwere ike imere m nnukwu ihu ọma, achọrọ m ịmepụta edemede nke na-enyere m aka ịmepụta .sum n'oge ụfọdụ mana amaghị m otu esi ahazi ya. Nwere ike inyere m aka igosipụta ụfọdụ ntụpọ. Daalụ, m ga-ege ntị ma ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka.
Ndewo, ehihie ọma, lee, m na-arụ ọrụ na lex, ya mere ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka na Akwụkwọ edemede, nke m nwere ike iji na-agba faịlụ lex ahụ, nke na-eweta lex (lex.yy.c) na faịlụ ntinye data .
mmiri mmiri ekele doc !!! Adị m ọhụrụ na edemede ahụ daalụ nke ukwuu ekele m ga-anọ na nche na nkuzi ọhụrụ gị !!!!
Zaghachi Wilmer Ron
Daalụ nke ukwuu maka onyinye gị, amalitere m ịbanye na unix ma ọ dị obere na mmadụ na-akọwa eluigwe na ala nke koodu a n'ụzọ dị mfe. Ọ ga-amasị m ịjụ gị ma ọ bụrụ na iji usoro gị, enwere m ike ide edemede nke na-enyere m aka ịchọta n ọnụ ọgụgụ faịlụ ndị bi n'otu ụzọ ahụ, yana m depụtaghachi ha na folda ọzọ ... mmadụ gwara m na m nwere ike ịchekwa na txt ụzọ na aha faịlụ m, mana ọ naghị edo m anya etu esi eme ya. Ana m ege ntị.
Zaghachi Karen Vega
Ndewo Enwere m VPS mana achọrọ m enyemaka n'ihe ụfọdụ ma ọ bụ n'onwe m Enwere m mmasị otu esi emepụta edemede ma ọ bụ ihe ọ bụla ka m wee nwee nkwado onwe m nke ihe niile dị na folda m / mgbọrọgwụ na nkwado ndabere na-agba kwa elekere 1 ọ bụrụ na m ị nwere ike inyere aka na m ga-ekele gị nke ukwuu na nke ahụ
M ga ahapuru gi facebook ma oburu na ichoro inyere m aka achoro m enyemaka 🙂
Zaghachi Eibar Amaya
Jorge Rodriguez kwuru dijo
kee m otu ka m ping ma nyochaa ụfọdụ akụrụngwa netwọkụ na ụlọ ọrụ
mana emere m ka ọ dị mfe
metụ red.sh && chmod + x red.sh
chụpụrụ '# -- NTỌ: UTF-8 -- '>> red.sh
nkuzi mgbamejije 'ping 10.50.0.125 -w 5' >> red.sh
nkuzi mgbamejije 'ping 10.50.0.80 -w 5' >> red.sh
na-agba ya ./red.sh na mma
Zaghachi Jorge Rodriguez
Ezigbo, Achọrọ m ịmepụta edemede echichi akpaka. Adị m njikere ịkwụ ụgwọ maka ọrụ emechara nke ọma. Ndi nwere mmasi, ziterem E-mail carranzalh@gmail.com. Daalụ
ha inu m ọkpa XD
Morningtụtụ ọma enyi, i nwere ike nyere m aka ihe
Achọrọ m ịme ndabere na linux nke ụlọ ọrụ ebe ọ bụ na ọ dị mma ka nje ghara ijide ya mana amaghị m otu esi eme ha
Achọrọ m ịmepụta edemede nke ga-ebu faịlụ ma ziga ha na ftp
Ọ ga-amasị m tupu oge eruo idegara email m
Onwere Rekonq 0.8.1
Gwa anyị ihe bụ ọkacha mmasị gị ngwa